ऐतिहासिक भौतिकवाद र यसको विकास प्रक्रिया – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७३, २६ पुस मंगलबार १२:३९ October 23, 2020 4106 Views
भौतिकवादी द्वन्द्ववादको विकासमा द्वन्द्ववादको विकास (उच्चतम विकास) महत्वपूर्ण परिघटना हो । १९ औँ शताब्दीको जर्मन दर्शनको उच्च विकासमध्ये भौतिकवादपछिको अर्को महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको थियो । द्वन्द्ववादले तात्कालीन समयमा जर्मनीको समाजमा रहेको अधिभूतवाद (Metaphysical) लाई निर्मम प्रहार गरेको थियो । महान् जर्मन दार्शनिक विल्हम फ्रेडरिक हेगेल (सन् १७७०–१८३१) ले यो पद्धतिको विकास गरेका थिए । उनले समाजमा व्याप्त इसाई चिन्तनमाथि प्रहार गर्दै तीनवटा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गरे ।
विकास दुई तरिकाले हुन्छ : १) क्रमिक र २) क्रान्तिकारी । त्यस्तै विकास क्रमिक रूपले अगाडि बढ्दै निश्चित चरणमा पुगेपछि गुणात्मक फड्कोमार्फत समाजमा उथलपुथल आउने धारणा उनको रहिआएको थियो । तर हेगेलको दर्शन द्वन्द्ववादबाहेक वस्तुवादी अतिभूतवादी थियो । उनी भन्छन्, ‘परम् आत्माले समाज चलेको हुन्छ । अर्थात् राज्यसत्ता गौण र चेतना प्रधान हो ।’ त्यसलाई प्रस्ट पार्न उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रको विशिष्ट आत्माले त्यस राष्ट्रको चेतना र अन्य पक्षहरूलाई ठोस रूपले अभिव्यक्त गर्छ । उक्त विशिष्ट आत्मा सो राष्ट्रको आधार र उपरिसंरचना तथा प्राविधिक सीपको साझा चिह्न हो ।’
महान् जर्मन शास्त्रीय दार्शनिक फायरबाख (सन् १८०४–१८७२) आ नो समकालीन समयमा प्रभुत्व जमाउन सफल मात्र भएनन्, कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सजस्ता दार्शनिकहरू पनि तरुण हेगेलवादी बने । उनले हेगेलको आदर्शवादको कडा प्रतिवाद गर्दै इसाई धर्मको सार ग्रन्थमा लेखेका छन्, ‘तर मस्तिष्क तबसम्म मात्र चिन्तनको इन्द्रिय रहन्छ जबसम्म त्यो मानिसको टाउको र शरीर जोडिएको हुन्छ ।’
फायरबाखको दर्शन अथवा भौतिकवादको प्रस्तावमा मानव रहिआएको थियो । उनले सत्तालाई प्रधान र चिन्तनलाई गौण हुन्छ भनेर हेगेलको दर्शनमा रहेको अधिभूतवादी (Metaphysical) चिन्तनमाथि ठाडो प्रहार गरे । उनी के भन्छन् भने सत्ताले चिन्तनलाई निर्धारण गर्छ । पदार्थ प्रमुख हो । पदार्थबिना चेतनाको अस्तित्व रहँदैन । उनले त्योभन्दा पहिलेदेखि समाजमा व्याप्त रहेको अधिभूतवादी चिन्तनमाथि प्रहार गरे । त्यस्तै उनी अगाडि भन्छन्, ‘सत्ताको प्रमुख आधार मानिस हो । मानिसलाई नलिने हो भने सत्ता र चिन्तनको आधार अर्थहीन हुन्छ ।’ तर दुवै जर्मन शास्त्रीय दार्शनिकहरू हेगेल र फायरबाखमा कतिपय अधिभूतवादी चिन्तनहरू रहेका थिए ।
जर्मन भौतिकशास्त्री रबर्ट मायरले सन् १९४६ मा यल तजभ अयचचभबितष्यल ायचअभ नामको पुस्तकमा एउटा विश्वव्यापी धारणा प्रस्तुत गरे, Energy nither be created nor be destryed but it can be change one form to another form.”
चाल्र्स डार्बिनले लामो अध्ययन गरी मानव तथा अन्य प्राणीहरूको विकाससम्बन्धी विभिन्न तरिकाबाट वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाए :
उनले विभिन्न विधि पत्ता लगाए । त्यसकारण डार्बिनको जीवविकाससम्बन्धी सिद्धान्तले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले द्वन्द्ववादमा भएका क्रान्तिकारी विचारदेखि प्राकृतिक विज्ञानले २० औँ शताब्दीसम्म गरेको अविष्कारको अनुभवहरूलाई दार्शनिक रूप दिएर ऐतिहासिक भौतिकवादको जग बसाले । ऐतिहासिक भौतिकवादका विभिन्न पक्षहरू यसप्रकार छन् :
राज्यसत्ता भनेको समाजको वर्गीय, आर्थिक तथा राजनीतिको समष्टि योग हो । कुनै पनि राज्यसत्ता वर्गीय चरित्रको हुन्छ । लेनिनका अनुसार ‘राज्यसत्ता भनेको शासक वर्गको हातमा रहेको हिंस्रक यन्त्र हो जसले विरोधी वर्गलाई नियन्त्रण र दमन गर्ने गर्छ ।’ अर्काे शब्दमा ‘यो वर्गीय दमनको हतियार हो ।’ यो संरचना मानव समाज विकासका क्रममा श्रम विभाजन भएपछि सङ्गठित रूपले विकास भएको हो । राज्यसत्ताका विभिन्न विशेषता यसप्रकार छन् :
२. समाजमा विद्यमान आर्थिक सम्बन्धको पक्षपोषण गरेर आफ्नो वर्गको रक्षा गर्छ ।
३. राज्यसत्ताले सङ्गठित संरचना तयार गरेको हुन्छ । फलस्वरूप सजिलै आफ्नो भूगोलभित्रका जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न र बाह्य आक्रमणबाट आफ्नो रक्षाका लागि शासन गर्ने गर्छ ।
मानव समाजको विकासक्रमसँगै श्रम विभाजन जटिल बन्दै गएपछि विभिन्न वर्गहरू देखापरे । परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गको विकास भयो । एउटा वर्गले अर्काे वर्गको श्रमशोषण गर्ने स्थिति पैदा भएपछि उत्पीडित वर्गलाई आफ्नो अधिकारको निमित्त सङ्घर्ष गर्नु जरुरी सर्त बन्यो । त्यही क्रममा वर्गहरू देखापरे । लेनिनले भनेका छन्, ‘वर्ग मानिसका ती समूह हुन् जसमध्ये एउटाले सामाजिक अर्थव्यवस्थाको पद्धतिमा आफ्नो स्थानको हैसियतले अर्काको श्रम लुट्न सक्छ ।’ यसरी शासक वर्गले शासित वर्गलाई दमन गर्न चाहे त्यो वैधानिक होस् वा अवैधानिक जसरी पनि, जुन तरिकाले भए पनि शोषण गर्ने पद्धति सङ्गठित तरिकाले गरेको हुन्छ । फलस्वरूप ती दुई वर्ग शोषक र शोषित बन्न गई समाज जटिल मोडमा आइपुग्छ । परिणामस्वरूप सामन्त, जमिनदार, कमाराकमारी, दास–मालिक, मजदुर, पुँजीपति, दलाल पुँजीपतिजस्ता जटिल वर्ग देखा पर्छन् । त्यसपछि ती वर्गहरूबीच अन्तरविरोध चुलिँदै जान्छ र सङ्घर्ष हुन्छ । ती सङ्घर्षका स्वरूपहरू वैधानिक–अवैधानिक दुवै प्रकृतिका हुन्छन् ।
अन्तविरोध दुई प्रकारका हुन्छन् : (१) प्रधान (२) गौण
प्रधान अन्र्तविरोध शत्रुतापूर्ण हुन्छ भने अर्काे गौण अन्तर्विरोध नरम प्रकृतिको हुन्छ । गौण अन्तर्विरोधमा वैधानिक सङ्घर्षका स्वरूप पर्छन् भने प्रधान अन्तरविरोधमा अवैधानिक, सशस्त्र इत्यादी पर्छन् । त्यसैले वर्ग शत्रुबीचमा सङ्घर्ष हुन्छ । समग्रमा आफ्नो वर्गीय हितका लागि हुने द्वन्द्वको स्वरूपलाई वर्गसङ्घर्ष भनिन्छ । वर्गसङ्घर्ष समाजलाई गति प्रदान गर्ने परिचालक हो । स्टालिनका अनुसार वर्गसङ्घर्ष समकालीन गतिशील समाजको पाङ्ग्राको नाभी हो ।
समाजको गतिसम्बन्धमा दुई परस्पर विरोधी धारणा रहिआएका छन् । पहिलो दृष्टिकोण आदर्शवादी हो जसले यो सांसारिक चीजलाई ईश्वरको देन मान्ने गर्छ जसअनुसार प्रकृति र मानिस रहस्यमय छन् । संसार अज्ञेय छ । जसले संसारलाई प्रभुको देन मान्ने गर्छ । अर्काे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ जुन भौतिकवादी दृष्टिकोण हो । भौतिकवादी दृष्टिकोण पनि दुई प्रकारका छन् : १) अतिभूवादी र २. द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी ।
क्रान्तिले पुरानो उत्पादन प्रणाली विस्थापित गरी नयाँ उत्पादन सम्बन्ध स्थापित गर्ने गर्छ । यसको असर समग्र समाजमा पर्न जान्छ अर्थात् यसले कानुन, राज्यसत्ता, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सामाजिक क्रान्तिका प्रक्रिया अगाडि बढ्न मुख्य दुईवटा आधार आवश्यक पर्छ :
विद्यमान समाजमा विभिन्न शास्त्रहरूले फरकफरक पहिचान बोकेर विभिन्न ढङ्गले समाज तथा ऐतिहासिक परिघटनालाई व्याख्या गर्ने गरेका छन् । विभिन्न शास्त्रहरू आफ्नो विशेष स्थानमा रहिआएका छन्, जस्तै ः राजनीतिकशास्त्र, समाजशास्त्र, न्यायशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषाशास्त्र, इतिहास इत्यादि । ती शास्त्रहरू आफ्ना क्षेत्रमा विशेष महत्वका छन् यद्यपि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादजस्ता पूर्ण विकसित भने छैनन् । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दायरा व्यापक छ । यसले सामाजिक गतिको विकास तथा सामाजिक रूपको विकाससम्बन्धी नियमहरू पत्ता लगाउने गर्छ । कानुनशास्त्रले स्थापित कानुनहरूको व्याख्या र विश्लेषण मात्र गर्छ । इतिहासले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादजस्तो समाज विकासका बारेमा अध्ययन त गर्छ तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले जसरी होइन । इतिहासले स्थापित मान्यताहरूको मात्र अध्ययन गर्ने गर्छ तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले समाज विकासका नियमहरूसमेत पत्ता लगाउने गर्छ । समाजको उत्पत्ति, राष्ट्र र राज्य, सामाजिक चेतना, वर्ग तथा समुदाय द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका मूल विषय हुन् ।